Qiimaha Tigidhada Tareenka Sare ee Konya Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKonya Barnaamijka Jadwalka Tikidka iyo Jadwalka Tareenka High Speed ​​Train
12 / 07 / 2019 06 Ankara, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY
Jadwalka Jadwalka Tareenka Xawaaraha Sare ee Konya Ankara iyo Jadwalka: Konya Xawaaraha Xawaaraha Xawaare Sare, oo ka mid ah tareennada xawaaraha sare ee ka tagaya Konya, waa mashruuc fududeeya nolosha oo waqti badbaadin kara. Tareenkaan, saacada 1 waxay aadaa daqiiqaddii 50 inta udhaxeysa Konya iyo Ankara. Gaar ahaan tareenka xawaaraha sare aad ayuu faa iido ugu leeyahay dhaqaalana u leh rakaabka sameyn doona safar ganacsi iyo waxbarasho.
Gaadiidka TCDD wuxuu isticmaalay dhamaan noocyada farsamada iyo casriga ee tareenada xawaaraha sare waxaana uu ku guuleystay in uu dhammaan nidaamyadoodu ku dhex daro nidaamkan.
Gaadiidka Xawaaraha Soomaliya ee Ankara-Ankara maalin kasta ayuu socdaa. Celceliska muddada safarkan waa saacadaha 7 iyo daqiiqadaha 1. Polatlı iyo Eryaman ayaa istaagay. Waxaad dooran kartaa inta u dhaxeysa laba tikidh, heer jaangooyo iyo jajab. Tareenka 50 ee tareenka xawaaraha sare leh waxaa ka mid ah hal fasal dhaqaale oo 2 + 2 iyo fasalka 2 + 2. Waqtigani waa waqti gaaban, sidaa daraadeed ma jirto wax gaari wata. Rakaabka waxay ka iibsan karaan tikidhada laga soo bilaabo bogga internetka.
Konya waxay samayn jirtay duullimaadyo caadi ah oo ah 7 inta udhaxeysa Konya iyo Ankara maalin kasta. Konya YHT waxay ka baxdaa joogsiyada qaarkood waxayna dhameystirtaa safarka Konya ilaa Ankara gudaha 1 saacadood gudahood. Hoos waxaa ku yaal miis loogu talo galay xargaha Ankara Konya YHT ee ka baxa saldhiga si faahfaahsan.
Konya Ankara YHT Saacadaha Safarka
Sida la arki karo, tareenka xawaare sare leh ee ka soo baxaya Konya ayaa si toos ah ugu gudbaya saldhiga kale saacadaha qaar iyadoo aan la joojin. Waxaad ka arki kartaa mashiinka tareenka ee Konya-Ankara YHT laga bilaabo 09.15. Tareenka wuxuu si toos ah u galaa saldhigga Eryaman isagoo aan istaagin xarunta labaad, Polatlı. Dhanka tareenka 22.05, tareenku wuxuu u gudbayaa saldhigga Eryaman isagoo aan joogsanayn Polatli waxaana uu yimaadaa Ankara oo ah 23.49.
Basaska ka yimid Konya iyo Ankara ayaa la siiyaa rakaabka ku safra tareenka xawaaraha sare leh ee Konya ilaa Ankara. Sidan oo kale, rakaabku si sahal ah ayey u aadi karaan degmooyinka ayaga oo aan kala go 'lahayn iyagoo isticmaalaya basaska isku xira.
Xarumo Tareenka Sare ee Konya Ankara
Qiimaha Tikidhada Tareenka Sare ee Ankara-Ankara
Qiimaha Konya-Ankara ee qiimaha YHT, oo si joogto ah u maamula duulimaadyada 7 ee u dhexeeya Konya iyo Ankara maalin kasta, waxay ka bilaabaan 31 TL. Dakhliga iyo fursadaha waxaa bixiya Gaadiidka TCDD gaar ahaan qiyaasta da 'yarta iyo kooxaha shaqada. Hababka arjiga iyo sicir-dhimista qiimo dhimista ayaa hoos ku taxan.
Konya Ankara Tareenka Xawaaraha Sare Heerka Ticket
Konya Xarumaha Xawaaraha Sare
Konya Ankara Jadwalka Tareennada Sare
Jadwalka Tareenka Xawaaraha Sare 2019 Maalin - RayHaber
2019 Qiimaha Tikidhada Xawaaraha Sare ee hadda ah Yadoo Timacadde & Waqti - RayHaber